Sakafo hamaritana | Nutri Diet
PaÃ¼ Heidemeyer | | Torohevitra hampihenana lanja, Vatsim-pivelomana
Amin'ny andro hihaonantsika dia misy ny fantatsika hoe "fitsaohana vatana«, Betsaka ny olona manahy momba ny toe-batany, ny endrik'izy ireo, ny lanjany ary ny tavy ananany. Betsaka ireo izay mitady hanana vatana voafaritra sy manintona kokoa.
Ny fananana vatana mafy orina ary tsy misy tavy voahangona dia hevitra iray tena misy amin'ny olona maro, dia holazainay aminao hoe iza izy ireo ny torohevitra tsara indrindra ny fananana sakafo famaritana ary inona ny lakile tokony harahina.
Misy sakafo mandoro tavy izay manampy antsika hamaritra ny hozatra, raha manaraka azy tsara isika dia afaka mahatratra ny vatana tadiavintsika, na dia tsy maintsy manohy ny fanaontsika amin'ny fanazaran-tena mba hanamafisana feo sy hamaritana ny hozatra.
1 Ny toetra mampiavaka ny sakafo ho faritana
1.1 Torohevitra fototra hotadidina ao an-tsaina
2 Sakafo hamaritana sy handoro tavy
2.1 Sakafo maivana
2.2 Avela ny sakafo tsakitsaky
2.3 Sakafo sy sakafo hariva
Ny toetra mampiavaka ny sakafo ho faritana
Betsaka ny atleta no mahita ny tenany amin'ny olana mahazo ny famaritana ny vatany, manala ny tavy mihangona amin'ny faritra sasany nefa tsy mila mahafoy ny hozatry ny hozany sy ny heriny. Noho izany dia ilaina ny manao sakafo ara-panahy voarindra sy ampy mba tsy hitrangan'izany.
Raha ny tadiavinao dia ny manafoana ny tavy ary mamaritra ny hozatra, dia tsy maintsy mahazo fifandanjana tsara ianao eo amin'ny fihinanana gliosida sy proteinina.
Torohevitra fototra hotadidina ao an-tsaina
Tokony ho takatra fa mba hanatanterahana fampisehoana ara-batana sahaza dia tokony alaina gliosida mba hananan'ny vatana hery sy manangana hozatraNa izany aza, raha mihoatra io fihinanana gliosida io isika dia hiteraka fa raha tsy mahazo tanjaka amin'ny tavy ny vatantsika dia avy amin'ny gliosida fotsiny no tokony hanolorantsika azy amin'ny fatra sahaza azy.
Manaraka izany, lazainay aminao hoe inona ny lakilen'ny fandoroana tavy sy ny tsy famoizana hozatra.
Ny fividianana kaloria sy ny fandanianao angovo, tokony mahay mandanjalanja. Raha mandany angovo bebe kokoa noho ny manome sakafo ianao dia hampiasa tavy ny vatanao izay mety indrindra. Na izany aza, raha mandeha mihoa-pampana amin'ny gliosida ianao dia tsy ho afaka handoro tavy.
Araraoty ireo gliosida mitete miadana, mampihena ny fisiany eo anelanelan'ny 5% sy 10%.
Mihinana sakafo 5 isan'andro amin'ny antonony. Tsy tokony handeha ela ianao raha tsy mihinana sakafo, dia hihetsika ny fizotran'ny metabolika.
Aza ilaozana proteininaRehefa mitady handoro tavy sy hamaritana ny hozatra ianao dia tena ilaina amin'ny fihazonana hozatra hozatra tsara.
Ahena ny fihinanana matavy, aza esorina izy ireo, fa hano ireo sakafo manankarena asidra matavy toy ny voanjo na zavokà. Menaka voanio na menaka oliva fanampiny.
Aza adino ny manisy rano. Raha mpanao fanatanjahan-tena ianao dia tokony hidradradradra tsara aorian'ny fampihetseham-batana tsirairay avy, mety indrindra ho an'ny hozatra sy taova ho sitrana ary handray tsara kokoa ireo otrikaina avy amin'ny lalan-dra. Ho fanampin'izany, hanampy amin'ny fanafoanana ny tavy sy ny poizina ianao.
Sakafo hamaritana sy handoro tavy
Ny sakafo azo avy amin'ny Internet dia tsy tokony horaisina ho sandaina, tsy maintsy atao manokana ary tsy maintsy ampifanarahana amin'ny tanjona filàna sy ny vatan'ny olona tsirairay. Noho io antony io dia manolotra anao ny menus vitsivitsy, lovia mba hanananao hevitra fototra momba ny atao hoe sakafo famaritana.
Manaraka izany dia holazainay aminao ny mety ho sakafo maraina "karazana" hahafahanao mandamina ny dingana famaritana ny hozatra sy ny fihenan'ny tavy.
Vary manontolos amin'ny oaka mihodina na tsipelina, miaraka amin'ny ronono skimmed.
Sombin-tsakafo iray: vanim-potoana, kiwi, akondro, paoma sns.
Atody, Aleo maka bebe kokoa mazava noho ny yolks, noho izany, ny fihinanana sakafo maraina mifangaroharo misy fotsy roa sy yolk tokana dia mety.
Yaorta tsotra misy voaroy mena.
Kafe mainty na ronono skim.
Avela ny sakafo tsakitsaky
mandray mba hampahahendry mint, fennel, chamomile, sns.
Juice voankazo voajanahary, namboarina alohan'ny fiofanana.
silaka ny mofo manontolo miaraka amin'ny menaka oliva sy voatabia, saosisy ambany tavy, vorontsiloza, volomparasy voajanahary na fromazy vaovao novaina.
Bara voa feno.
Voankazo sy legioma vita amin'ny voankazo sy legioma.
Hanozongozona ny proteinina.
Sakafo sy sakafo hariva
gliosida, paty sy vary amin'ny habetsany antonony, tsy mihoatra ny 100 grama. Ny tsara indrindra dia ny mandray 75 grama miaraka amin'ny sakafo.
Proteinina: tratra akoho na hena fotsy mahia.
Trondro namboarina na nendasina.
Lafaoro sy taranja voalohany: Lasopy legioma na crème, salady, legioma voatono, legioma natsatsika, broccoli, legioma nandrahoina na nohomboana, sns.
Araka ny hitanao dia tsy sakafo ara-dalàna io, satria araka ny efa nolazainay, manome anao famantarana vitsivitsy izahay mba hahafahanao mamorona ny menioo manokana mifototra amin'ireo hevitra ireo. Raha ny tokony ho izy, raha te hamaritra ny hozatra ianao ary manala ny tavy miangona amin'ny vatanao amin'ny faritra voafaritra tsara, mankany amin'ny manam-pahaizana manokana ianao na ao amin'ny gym mihitsy, ny mpanazatra dia afaka mitarika anao amin'ny fanapahan-kevitra.
Mikasika ny famaritana sy ny sakafo, aryDingana miadana izay mitaky fikirizana sy finiavana, manana tanjona mazava sy tena izy hahatratrarana ny vatana tadiavinao ao anatin'ny fotoana mety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Diet hamaritana
Kajy ny tavy amin'ny vatana